Shirka Amniga ee Maamul Goboleedka dalka oo ka furmay magaalada Kismaayo[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shirka Amniga ee Maamul Goboleedka dalka oo ka furmay magaalada Kismaayo[Sawirro]
KISMAAYO – Waxaa magaalada Kismaayo ka furmay shir ay isugu yimaadeen Wasaaradaha Amniga ee dowlad goboleedyada dalka iyo Saraakiisha Ciidamada AMISOM ee ka howlgala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Shirka ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiir dowlayaasha Wasaaradaha Amniga dowlad goboleedyada dalka,Guddoomiye kuxigeenka Amniga gobolka Banaadir iyo Agaasimayaasha guud ee Wasaaradda amniga gudaha dalka,Saraakiil Booliska ah,QM iyo AMISOM.
Shirkan ayaa looga hadli doonaa arrimaha amniga dalka,tayeynta Ciidanka Booliska,wadashaqeynta hay’adaha amniga dowlad goboleedyada dalka iyo kuwa qaranka.
Wasiiru Dowlayaasha Wasaaradaha amniga Dowlad goboleedyada Dalka ayaa shirkaan ku tilmaamay mid lagu xoojinayo amniga, wada shaqeynta Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada.
Shirkaan ayaa socon doona mudo labo casha ah,waxaana diirada lagu saari doona xasiloonida dalka iyo wada shaqeynta lamaaha Amniga.